အသေသတ်ခြင်းကို၎င်းမလိုချင်တဲ့ထားသင့် | Apg29
အခုတော့ကျွန်မရဲ့ဒုတိယစာအုပ် "ဒီမလိုချင်တဲ့" ဟုခေါ်ရေးပါ။ ဒါဟာငါဒီလောကသို့ရောက် လာ. unsolicited ဘယ်လောက်, ငါ့ကလေးဘဝအကြောင်းကိုပါပဲ။
ဒါဟာငါပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတဲ့မုဒိမ်းမှုဖွစျကွောငျးကိုအကြှနျုပျကိုမှပြောသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုငါမလိုချင်တဲ့, ငါ့လာမယ့်စာအုပ်၌သင်တို့ကိုပြောပြပါ။ မယ်ဆိုတာငါမလိုချင်တဲ့အများကဲ့သို့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဖြင့်သေမင်းနှင့်အပြစ်ပေး?
ငါအဟောင်းသို့မဟုတ်နေမကောင်း get လျှင်, ငါ "euthanasia" ကမလိုချင်တဲ့အဖြစ်သေမင်းနှင့်အပြစ်ပေးခံရသင့်သလဲ
ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုနှစ်ဦးစလုံးမမွေးသေးသောကလေးငယ်များ, ဖျားနာခြင်းနှင့်အန္တရယ်ကျရှငျနကွေကွောငျးကိုကြည့်ပါ။ သူတို့နှစ်လိုဖွယ်သို့မဟုတ်အလုံအလောက်တန်ဖိုးရှိသောမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအမြဲဦးသေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့စိတ်ကူးကဤသို့မဟုတ်ပါကအခြားသူတစ်စုံတစ်ဦးကဆိုသည်တယ်။
အချို့မိတ်ဆွေများကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လျှင်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆန့်ကျင်တက်သရုပ်ပြပြောခဲ့ကြသည်: "! သင်သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိမဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာ" မြတ်နိုးဘဝမှရှက်ခြင်းကိုသငျ့သလော ဒီကိုဘယ်လိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ခဲ့တာမဟုတ်လော ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါလိမ့်မယ်သူတဦးတည်းကပြောသည်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျ၏ 13 နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသည်။ "ငါသည်ကိုးလပဲရှိသေးတယ်, ငါမွေးဖွားခဲ့သည်အခါ, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးမွေးနေ့ဂုဏ်ပြုရှေ့မှာပဲသုံးလစောင့်ဆိုင်းမယ်လို့တစ်နှစ်ယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ?!": သူကဆိုသည်
9 လ + = 1 3?
သငျသညျမွေးဖွားခဲ့မီကိုးလဖြစ်ကြသည်။ ကိုးလတွင်, သငျသညျခဲ့ကြောင်းကိုသင်၏မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာလူ့အသက်ကိုရှိ၏။ မယ်ဆိုတာထိုကဲ့သို့သောဘဝဖျက်သိမ်းအသေသတ်ခြင်းကိုခံရ?
ကျွန်မအသက်တာ၌လွယ်ကူသောကြောင့်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ်ငါသည်ဝမ်းမြောက်ငါမွေးဖွားခဲ့သည်ကြီးမားတဲ့ပေါ့! ထိုလူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး: ငါအသက် 20 နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများတယ်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံရယူ! ထိုအခါငါတစ်စက္ကန့်အချိန်မွေးဖွားခဲ့သည်နှင့်ငါ့ဘဝ၏အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်!
ငါ့သမီးမွေးဖွားခဲ့သည်တဲ့အခါသူ Desire အမည်ရှိ။ ဒါဟာတပ်မက်လိုချင်သောအများအတွက်ပြင်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်နှစ်ဦးစလုံးသည်ငါ့ဇနီးနှင့်ငါ့အားဖြင့်အလိုရှိသောခဲ့သည် - နှငျ့ဘုရားသခငျအားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သော!